Duplicati codsi aad u fiican oo aad ku sameyso bakcups nidaamkaaga | Laga soo bilaabo Linux
Nuqul codsi aad u fiican oo aad ku samayso bakcups nidaamkaaga
Dad badan sida caadiga ah ma qabtaan keyd joogto ah, maxaa yeelay aaladaha kala duwan ee hawshani waa kuwo dhib badan ama sababtoo ah ma haystaan ​​waqti ku filan. Taasi waa sababta maanta aan uga hadli doonno qalab fudud laakiin awood badan oo naga caawiya shaqadan.
Qalabka aan ka hadli doonno maanta waa Duplicati. Tani waa qalab aad u fudud isla mar ahaantaana ah qalab horumarsan oo xallin kara dhibaatooyinkaaga keydka ah.
1 Ku saabsan Duplicati
2 Sidee loo rakibaa Duplicati Linux?
Ku saabsan Duplicati
Nuqul waa isha furan oo ruqsad ka haysta (LGPL), Duplicati wuxuu ku qoran yahay C # waxaana loo heli karaa Windows, Linux, iyo Mac OS X, oo lagu turjumayo Ingiriis, Isbaanish, Faransiis, Daanish, Boortaqiis, Talyaani iyo Shiine
Maanta asal ahaan waa macmiil kayd ah oo bilaash ah oo kaydiya si amni leh iyadoo la adeegsanayo sirta, keydinta korodhka ah, adeegyada daruuraha kaydinta oo la duubay iyo faylasha faylasha fog.
Wuxuu la shaqeeyaa Amazon S3, Windows Live SkyDrive (OneDrive), Google Drive (Google Docs), Rackspace Cloud File ama WebDAV, SSH, FTP (iyo kuwa kaloo badan).
Duplicati waxay leedahay nidaam jadwal gudaha ah, sidaa darteed way fududahay in la helo keyd joogto ah ilaa taariikhda.
Sidoo kale, barnaamijku wuxuu adeegsadaa iskuduwaha faylka wuxuuna awood u leeyahay inuu keydiyo keydad koror ah si loo badbaadiyo booska keydinta iyo baaxadda.
Duplicati waxaa lagu dhisay sirta AES-256 iyo keydadka waxaa lagu saxiixi karaa iyadoo la adeegsanayo GNU Privacy Guard.
Qaar ka mid ah qaababka guud ee barnaamijkan keydku waa:
Waa codsi marinka iskutallaabta. Waxaa loo heli karaa nidaamyada hawlgalka ugu waaweyn, Gnu / Linux, Microsoft Windows, MacOS.
Qirayaa maamuusyo web kala duwan keyd ahaan, tusaale ahaan WebDAV, SSH, FTP, iwm.
Barnaamijkan wuxuu adeegsadaa Furashada AES-256 si loo kaydiyo xogta keydka ah.
Taageerada kala duwan adeegyada daruuraha si loo kaydiyo xogta sida Google Drive, Mega, Amazon Cloud Drive, iwm.
Kuu ogolaanayaa kaydinta fayl, noocyada dukumintiga sida dukumintiyada ama sawirrada, ama xeerarka shaandhaynta qaaska ah.
Shaandheeyeyaasha, tirtiro qawaaniinta, ikhtiyaarrada wareejinta iyo xawaaraha, iwm.
Noqo mid codsi ku saleysan webka Waxaan ka heli karnaa dalabka meel kasta, xitaa mobilka.
Ugu dambeyntiina uguyaraan, Duplicati waxay bixisaa ikhtiyaarro iyo dejjinno kaladuwan, sida miirayaasha, sharciyada ka saarida, wareejinta, iyo xulashada xargaha ee loogu talagalay fulinta kaydinta ujeedooyin gaar ah.
Sidee loo rakibaa Duplicati Linux?
Kuwa xiiseynaya inay ku rakibaan qalabkan qaybinta Linux, Waxay ku samayn karaan iyagoo raacaya tilmaamaha aan hoos ku wadaagno.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah Tag websaydhka arjiga halka qaybta soo degsashadeeda aan ka heli karno nooca ugu dambeeya ee xasilloon. Waxaan ku sameyn karnaa tan xiriirka soo socda.
Hada kiiska kuwa isticmaala Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo derivatives waxay awoodi doonaan inay ku rakibaan codsigan iyagoo soo dejinaya xirmada deynta ugu dambeysa ee xasilloon (xilligan waa nooca 2.0.4.15) oo aan ku soo dejisan doonno amarka wget sida soo socota:
Kadib markaad soo dejiso, waxaad ku rakibi kartaa xirmada cusub ee lagu rakibay maamulaha xirmada aad jeceshahay ama ka timaadda terminaalka adoo garaacaya amarka:
Haddayna dhibaato ka haysato ku-tiirsanaanta, waxaa lagu xaliyaa amarka:
Wixii ku saabsan kuwa Fedora, CentOS, RHEL, openSUSE ama nidaam kasta oo kale oo adeegsadayaasha taageera RPM waxay ku soo dejinayaan xirmada RPM:
Ugu dambeyntiina waxaan ku qaban doonnaa rakibidda amarka:
Ugu dambeyntiina, yaa doonaya Arch Linux, Manjaro Linux, Antergos ama kuwa kale ee isticmaala Arch Linux qaybinta awoodi doonaan inay ku rakibaan codsigan ka keydinta AUR.
Waa inay lahaadaan kaliya saaxir AUR oo lagu rakibo oo ay keydiyaan bakhaarkan nidaamkooda. Haddii aadan tan haysan, waad la tashan kartaa qoraalka soo socda.
Si loo rakibo, waa inaad maamushaa amarka soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nuqul codsi aad u fiican oo aad ku samayso bakcups nidaamkaaga
Waxaan tijaabinayay qalabka dhowr toddobaad. Waxay u taagan tahay furitaanka OpenSource, bilaash, isku dhufashada badan, meelo badan oo la tago iyo fudud. Waxay u oggolaaneysaa kaydinta kororka iyo soo celinta faylasha sidoo kale way fududahay, waddada asalka ah ama galka kale.
Jawaab Leo Jiménez
Hadda waxaan isticmaalaa wicitaan. Waa aalad "deduplication" ah, oo aad ugu eg borgbackup, softiweer bilaash ah, kuna qoran go, multiplatform, soon iyo habka loo sameeyo keydadka waa mid aad u haboon. Waxaad u isticmaali kartaa hal bakhaar hal marti-geliyeyaal badan. Waxaan isticmaalay qalabkan muddo hal sano ah waana mid aad loogu taliyay. Aad u fiican. https://restic.net/